Madagascar- Indonésie : Maro ireo mpandraharaha te hampiasa vola eto Madagasikara -
AccueilSongandinaMadagascar- Indonésie : Maro ireo mpandraharaha te hampiasa vola eto Madagasikara
Nandritra ny fihaonan’ny minisitry ny serasera, Harry Laurent Rahajason tamin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny Indonezianina Retno L.P. Marsudi manoloana ny fanatrehana ny fivoriambe andiany fahafolo mikasika ny demokrasia izay natao tao Bali ny faha-7 hatramin’ ny faha-8 n’ny volana desambra no nilazany fa « betsaka sy maro ireo mpandraharaha eto Indonésie no te hampiasa vola any Madagasikara » hoy ity minisitry ny Raharaham-bahiny Indonezianina ity. ho an’ny minisitry Serasera malagasy moa tany am-boalohany dia efa nandroso ny resaka izay nifanaovan’izy ireo mikasika izay fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta, izay « efa nisy tokoa ny antso izay efa nataon’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina ho an’ireo mpampiasa vola tsy miankina ao Indonésie, ary efa nisy mihitsy aza ny fandanian’ireo parlemantera malagasy ny lalàna mikasika ny ZES zones ‘’économique spécial » izay ahafahan’ireo mpampiasa vola manatanteraka ny asa izay kasainy atao sy tanterahiny » hoy hatrany ny minisitry ny Serasera. Manoloana ireo resaka nifanaovana moa dia nilaza ny minisitry ny Raharaham-bahiny Indonezianina Retno L.P. Marsudi fa hisy ny tatitry ny resaka izay hifanaovany amin’ ireo mambran’ ny governemanta any an-toerana, ka manoloana izany hoy ny minisitry ny Raharaham-bahiny Indonezianina, ny irariana dia ny fisokafan’ny masoivoho Indonezianina tsy ho ela eto Madagasikara ahafahana manamafy izay fifandraisana eo amin’ ny firenena roa tonta.
Mikasika kosa indray ny fivoriambe andiany fahafolo, izay natrehan’ny minisitry ny Serasera, Harry Laurent Rahajason izay niompana amin’ny lohahevitra hoe “ ny demokrasia ve ahafahana mitazona ny fampanantenana ». Raha ny voarakitry ny fandaharam-potoana omaly dia teo ny lohahevitra hoe « manao ahoana tokoa ny fiantraikan’ny demokrasia eny anivon’ny fiarahamonina mba tsy hisian’ny fizarazarana, ny tsy filaminana ». Anisan’ny nojeren’ireo mpandray anjara ihany koa nandritra ny fivoriambe andiany faha-10 ity ny hijerena paika ahafahana manolotra fitantanana ny demokrasia tsy mampizarazara, ary ny hisian’ny demokrasia mivantana amin’ny tombontsoa ara-ekonomika. Anisan’ny nandray fitenenana manoloana io fivoriambe io ihany koa ny minisitry ny serasera izay namoaboasany ny fahalalahana maneho hevitra, fahalalahana an-gazety izay fototry ny demokrasia. Manoloana ireo hevitra izay naposany ihany koa no nanohanany ny heviny tamin’ny fihetsika izay efa nasehon’ny fanjakana amin’ny fanajana izay fahalalana izay, dia ny nahalanian’ ny lalàna vaovao izay mifehy ny serasera, ka nanalana tao anatin’izany lalàna izany ny fanagadrana mpanao gazety. Anisan’ ny nasian’ny minisitry ny Serasera teny ihany koa ny mikasika ny fandraisana anjaran’ny vahoaka amin’ny fanehoan-kevitra. Mavitrika noho izay demokrasia izay saingy, misy tokoa ny lalàna izay mamehy izany. Nifarana omaly tokoa moa ity fivoriana izay notanterahina tatsy Indonésie ity.
Raha ny fandefasana taratasy no niandohan’ny paositra malagasy dia mivoatra hatrany manaraka ny toetr’andro izy ankehitriny. Mivoatra manaraka ny teknolojia mba ahafahana manome fahafaham-po ny mpanjifa ao aminy. Manoloana izay fandrosoan’ny paositra izay, dia nanambara ...Tohiny